Shirkii Dalalka Waqooyiga Yurub ee looga hadlayay Nabadda iyo Horumarinta oo lagu soo gabo-gabeeyay Caasimadda Finland Sabti, October 20, 2012(HOL): Waxaa lagu soo gabo-gabeeyay caasimadda dalka Finland ee Helsinki shir laba maalmood socday kaasoo ay soo qaban qaabiyeen xubno ka socday dalladda (Nordic Union of Somali Peace and Development Organisations) oo ah dallad ay ku mideysan yihiin affar urur oo Soomaaliyeed kuwaasoo ka kala dhisan dalalka Norway, Swedan, Denmarka iyo Finland.
Shirkan oo ah kii sedexaad ee ka dhaca wadamada waqooyiga Yurub ayaa waxaa uu ka dhacay Helsinki oo ah caasimada wadanka Finland, halka labadii shir ee ka horeeyey kuwan ay ka dhaceen wadamada Norwey iyo Sweden. Abdiaziz Godah
Sabti, Oktoobar, 20, 2012 (HOL) – Saraakiisha ciidamada midowgga Africa AMISOM ee ka socda dalka Jabuuti iyo odayaasha dhaqanka gobollka Hiiraan ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Baladweyne. Afhayeenka AMISOM oo sheegay in Nabadgalyada Muqdisho ay tahay mid Wanaagsan Howgalladuna ay sii soconayaan 10/20/2012 8:26 AM EST
Sabti, Oktoobar 20, 2012 (HOL) — Kulan oo looga hadlayay isbedelka ka dhacay degmada Marko kaddib markii Al-shabaab laga saaray ayaa waxaa ka qaybgalay waxgaradka, odayaal, dhallinyaro, aqoon-yahanno, haween iyo ganacsatada degmada. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland oo sheegay inuu yahay Murashax u taagan xilka Madaxweynenimo ee Puntland 10/20/2012 7:02 AM EST
Sabti, Oktoobar 20, 2012 (HOL) — Iyadoo la filayo in sanad kadib ay Puntland ka qabsoomaan doorashooyin ku dhisan nidaamka axsaabta badan, ayaa waxaa soo badanaya tirada siyaasiyiinta sheegay in ay u tartami doonaan xilka madaxweyne nimada ee Puntland. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo dalka Koonfur Afrika ku dilay wiil kale oo Soomaaliyeed, kaasoo ay ku dileen Toorreey 10/20/2012 6:54 AM EST